19 June - June 19
ဘာလိုလိုနဲ့ ငါချစ်တဲ့လူတွေ ငါမြတ်နိုးတဲ့နေရာတွေနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာ တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ဒီလိုနေ့ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို မျက်စိထဲ စိတ်ထဲမှာ ပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်။
ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်တွေကြားမှာ ငါဟာ အကျိုးရှိတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေရှိသလို အကျိုးမရှိ အရည်မရ အဖတ်မရ လုပ်ခဲ့တဲ့တာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါ စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်တယ်။ "ပြောမှသိ ထိမှနာ သာမှနေ သေမှခင်" အဲလိုဖြစ်နေရင်တော့ ငါဟာ ... ။ အင်း ... ပျှမ်းမျှခြင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် ငါ မတိုးတက်သေးပါဘူး။
လွင့်မျောနေမိတဲ့ စိတ်တွေနဲ့အတူ ... ခင်ဝမ်း ဆိုထားတဲ့ "ဆယ်လမွန်ငါးတို့အပြန်" သီချင်းလေးကို နားစဉ်နေရင်းနဲ့ အတွေးတွေ နယ်ချဲ့နေမိတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကို ကိုအော်လံမောင် အဓိပ္ပယ်ဖော်ထားတာကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။ စာသားလေးတွေက အရမ်းလေးနက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိလှပါတယ်။ ပြန်ပြီး မျှဝေချင်ပါတယ်။
ရေး/ဆို - ခင်ဝမ်း
ရေလွှာလည်း ခင်းပျံ့ကြည်လင်စေ ၊ မိုးဦးလည်းလှပ သာယာစေ ဘ၀စေရာ တာဝန် ၊ ကျေပွန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့ ၊ ရေစုန်ကို ဆန်ကာ ပြန်ခဲ့ပြီ မိုးဦးရေဆန် မိုးဦးရေဆန် ၊ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် ၊ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် အပြန် - အပြန် - အပြန်.... ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန်
V1 မှာ မိုးဦးချိန် ရဲ့ အခင်းအကျင်း ရာသီဖွဲ့ ကလေးနဲ့ စထားပါတယ်။ လှပသာယာ နေတဲ့ မိုးဦးရဲ့ လှိုင်းလေ ငြိမ်တဲ့ (သင်ဖျူးခင်းထားသလို လှိုင်းလေ မရှိသေးပဲ ကြည်လင်တဲ့ ရေလွှာ ) အချိန်မှာ ဘ၀တာဝန်တွေ ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေ ပြန်လို့လာခဲ့ပါပြီလို့ ဆယ်လမွန်ငါးတွေကို ညွှန်းဖွဲ့ထားပါတယ်။ ဘ၀စေရာ တာဝန် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးဟာ အပိုအလို မရှိ လှပလွန်းလှပါတယ်။
[ ဒီ စာပိုဒ်ကတော့ ငါ့အတွက် မဖြစ်သေးပါဘူး။ လိုပါသေးတယ်။ ]
ပြန်ချိန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခိုင်မာစေ ၊ ရာသီလည်းတွက်ချက် မှန်ကန်စေ စိတ်တူရာခိုဝင် ပြည့်စုံချိန်၊ ပြန်ခဲ့မယ်တဲ့ ၊ ငယ်ရွယ်စဉ် ရှာဖွေစွန့်ခဲ့ပြီ မိုးဦးရေဆန် မိုးဦးရေဆန်၊ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် ၊ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် အပြန် - အပြန် - အပြန်.... ၊ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန်
V2- ပြန်ကြမယ် ဆိုတော့ ပြန်ချင်တိုင်း ပြန်လို့ မရပါဘူး။ ရာသီချိန် နဲ့ ပြန်ရ မှာ ဖြစ်သလို ၊ ပညာ၊ငွေကြေး ပြည့်စုံ အောင်ရှာ ခဲ့ဖို့ကလည်း လိုပါသေးတယ်။ မွေးဒေသ ကိုစွန့်ပြီး လာခဲ့ရကျိုးနပ်အောင် ၊အပြန်လမ်း လှဖို့ကလည်း လိုပါ သေးတယ်။ စိတ်တူရာ ခိုဝင်တဲ့ ကြင်သူ ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။
[ မွေးမြေရပ်ကို စွန့်ခွာပြီး ပညာရှာ၊ စီးပွားရှာနေတဲ့ သူတိုင်းအတွက် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ စာသားတွေက အရမ်း အသက်ဝင်လှပါတယ်။ ငါအတွက်လား! အင်း ... အများကြီး ကြိုးစားရဦးမှာပါ ]
ချစ်ဖော်လည်းလိုက်ခဲ့ ခေါ်ငင်စေ၊ ၀ဋ်ကြွေးလည်း တုံ့လှည့်ကျေနပ်စေ ဦးဆောင်သူစေရာ ၊ ယုံကြည်စွာ လိုက်ခဲ့မယ်တဲ့ ၊ မောင်မယ်စုံ ဆန်ကာပြန်ခဲ့ပြီ မိုးဦးရေဆန် မိုးဦးရေဆန်၊ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန်၊ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် အပြန် - အပြန် - အပြန်.... ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန် ဆယ်လမွန်ငါးတို့ အပြန်......
V3-ပြန်ကြမှတော့ မောင်မယ်စုံ တွဲဖက်ပြီး ရေစုန်ကို ဆန်ကြတာပေါ့။ ဦးဆောင်တဲ့သူလည်း ရှိနေပြီပဲ။ အတူပြန်ကြမယ့် ခရီးရှည်ကြီးသည် မိုးဦးမှာ စလိုက် ကြရအောင်။ ချစ်ဖော်လည်း လိုက်ခဲ့တော့လို့ ခေါ်ထားပါတယ်။
[ ကျွေးကျေးဇူး၊ မွေးကျေးဇူးတွေ ပေးဆပ်ပြီး ပညာစုံ ဥစ္စာစုံပြီးတဲ့ တစ်နေ့မှာပေါ့ ... ]
သီချင်းလေးက ခံစားမှုရသ အမျိုးမျိုးနှင့် ရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အားကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ မိတ်ဆွေရော ... နားထောင်ပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတာလေးတွေ၊ ပေးဆပ်ဖို့ လိုအပ်နေတာလေးတွေ စိတ်ထဲကနေ အနည်းငယ်တော့ ထွက်လာမှာပါ။ ရှေ့ဆက်ရမည့် ခရီးအတွက် ခွန်အားသစ်တွေပါ ရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ဗျာ
credit : ကိုအော်လံမောင်
ByN 11:14 pm
သီချင်းစာသားတွေဖတ်ပြီး နားထောင်သွားတယ် ဖိုးချမ်း။ သီချင်းစာသား၊ အဓိပါယ်တွေက တော်တော်ကောင်းတယ်။ တနေ့နေ့ပေါ့ ဆယ်လမွန်ဖိုးချမ်းရာ...
WaiHin 11:39 pm
ကိုချမ်း... သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို နှစ်ခေါက်တိတိ နားထောင်သွားကြောင်း...
Myo Kyaw Htun 2:13 am
ကျွန်တော်လည်း June7က ဒီရောက်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တာပဲ။ ကိုချမ်းရေးထားသလိုပဲ အကျိုးရှိတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေရှိသလို အကျိုးမရှိ အရည်မရ အဖတ်မရ လုပ်ခဲ့တဲ့တာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ အခုထိလဲ ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲတာ ဘာမှမရှိသေးဘူး။
ahmeisoekyi 3:54 am
ဖိုးချမ်းအဲ့ချို နင်တစ်နှစ်ကြီးများတောင် ကြီးတွားပီပေါ့နော်..ဟားဟားး..အော် mature ဖြစ်လာပီလို့ပြောတာပါဟာ..
နာကအစက ခင်ဝမ်းဆိုလို့ ပျင်းချရာကြီးဆိုပီး မနားထောင်ဝူးလုပ်နေတာ... စာသားတွေကြည့်လိုက်မှ..ကွက်တိကို ကိုက်နေဒယ်ဟေ့..
Sai Linn Thu 5:32 am
ခံစားရစေပါတယ်...ငါလည်း ဒီမှာ ၆ လကျော်သွားပြီ...ဘယ်တော့ ပြန်ရမယ်ဆိုတာ ကို ခုထိစဉ်းစားလို့ မရဘူး...သေချာတာတော့ ပြန်ရမယ်ဆိုတာ ကို ငါ့နှလုံးသားထဲ မှာရှိနေတာ ကံကောင်းတာပဲ...
Ko Nay Gyi 6:27 am
ကိုချမ်းရေ.. အောင်မြင်စွာနဲ့... ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီး အမြန်ပြန်လာနိုင်ပါစေဗျာ...။ ပြီးမှဟိုကိုမလွမ်းနဲ့နော်..။ ဒီမှာတော့ Internet သုံးရတာ Connection မကောင်းဘူး....။ :P
Mg Yin 2:07 pm
Thanks for Ko Khin One's masterpiece song..
listerned withatank of thinking...
I wonder if you could share this song too coz i could not find it easily (But I also respect Ko Khin One's copy right)
Steven Alexander 4:00 pm
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲကွာ။ အားလုံးတော့ မရနိုင်ဘူးပေါ့ကွာ။ တစ်ခုခုကို လိုချင်ရင် တစ်ခုခုတော့ ပေးဆပ်ရမှာပါပဲ။ အရည်မရအဖတ်မရလို့ မတွေးပဲ အတွေ့အကြုံလို့ တွေးကြည့်စမ်းပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ...:)
wishy-washy 6:52 pm
I've been in TW about 2yrs N one thing I got is.........got more 10Kg in weight.. :D
CMS 6:55 pm
byn : ကျေးဇူးပါ byn :)
waihin : သီချင်းတင်ရကျိုး နပ်သွားပြီ :)
myo kyaw htun : နိုင်ငံခြားနေလဲ ဘ၀တူတွေပါပဲ :)
ahmei : ဟုတ်ပအမိရေ အဲဒီသီချင်းလေး အရမ်းခံစားရတယ် :)
sailinnthu : ပြန်ပြီး မိန်းမယူတော့ မလို့လား :P
mg yin : welcome : if u need any song . just tell me :)
steven : အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဆရာရေ :)
CMS 6:57 pm
wishy-washy : haha so . u gotta become fatty :P
နှစ်ကူး 11:16 pm
ဖိုးချမ်း.. ရေ... မိုးကောင်းကင်တွင် ကြယ်များလင်းလက်၍ မြေပြင်ပေါ်တွင်ပန်းများပွင့်စေသော်.. ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီ ကားထဲမှာ စကြားဖူးထဲက နာလည်းဒီသီချင်းကို ကြိုက်နေတာ...။ ဒါပေမယ့် ဆယ်လမွန်ငါးတို့အပြန် ဆိုတာ ကိုအော်လံမောင် အဓိပ္ပါယ်ဖော်သလောက်ကြီး နားလည်ခဲ့ဖူးးး... ကြိုးစားပါ... ကြိုးစားရင် ဘုရားတောင် ဖြစ်သေးတယ်။ ကံကောင်းလို့တော့ ဘုရားမဖြစ်ဖူးနော်..။
Using "site" Query modifier in Google Search
မိုးရေဖွေးဖွေး ရွှေမန္တလေး (သို့) မိုးတွေရွာရင် ...
Tracking and Displaying Online Visitors
How to find happening stuff on Net
Internet and Porn Industry (18+)
Microsoft TestKing - 2003
Delete an Undeletable file (or) Unlocker
Freeware Icons collection
London 2012 Olympic New brand launches
71 CSS menus for Web Designer
How to create Transparent image for different back...
How to download and play YouTUBE video